Music Archives — Trip LEE - OFISIALY SITE
Dia ao an-tsaina, raha nanana fahafahana hitsena azy ireo ny sasany amin'ireo fanontaniana Mba…
Ny ankamaroan'ny fantatrareo ahy ho toy ny mpanao rap sy ny mpanakanto, fa ny marina dia, ao am-pony foana aho mpitory.
Fa raha mbola foana aho manao mozika, ny faniriana lalina indrindra no mba hitory ny Filazantsara sy hanambara ny famindram-po sy ny voninahitra 'i Jesoa Kristy. By ny fahasoavana aho Nanana fahafahana mampiasa ny mozika mba hanao izany amin'ny sehatra-bahoaka. Tiako aho isaky ny faharoa izany ary niezaka aho ny hanao izany amin'ny fomba tsara indrindra. Nandritra ny taona maro, Nahatsapa aho Andriamanitra niantso ahy ary manofana ahy tsy mba ho hira, fa koa mba hitory sy manoratra.
Izany no mahatonga tamin'ny herintaona nosoratako The Good Life, ny boky izay misitrika lalina any amin'ny hafatra ao ambadiky ny firaketana an-tsoratra ny mitovy anaram-boninahitra. Izany ihany koa ny antony nanambara farany latsaka fa tsy ho mandeha tena betsaka araka izay efa. Te-hianatra ny fomba ho mahatoky pasitera, ary izay ihany no tena mitranga ao anatin'ny fiangonana eo an-toerana. Noho izany aho maka ny fotoana vola amin'ny fianarana avy amin'ny pasitera an'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana any Washington, DC. Tompo vonona, toy ny manompo ny mpiasa tao amin 'ny fiangonako, aho…
Izy no nahazo fo gadona, Izy no bout mitombo…
Mpanompo miady ny menarana tany…